२२ वर्षको युवाका तीन श्रीमती , तिनैजना मिलेर चौथी खोज्दै ! « Dainik Online
२२ वर्षको युवाका तीन श्रीमती , तिनैजना मिलेर चौथी खोज्दै !
एक युवाले तीन श्रीमती विवाह गरे ती तिनै पत्नीहरू उनी सँगै बस्छन्। अब ती तीन पत्नीहरू मिलेर चौथो श्रीमती खोज्दै छन्। यो पाकिस्तानको सियालकोटको कथा हो। अहिले यस विषयमा सियालकोट लगायत सम्पूर्ण पाकिस्तानमा चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि मुस्लिम समुदायमा एक भन्दा बढी विवाह हुनु कुनै नयाँ कुरा होइन तर तीन पत्नीहरूले चौथो खोज्नु चाहिँ पक्कै आश्चर्यजनक कुरो हो ।
उनको नाम अदनान हो र उनी २२ वर्षका मात्र छन्। यति कम उमेरमा उनका तीन पत्नीहरू छन्। अदनानको पहिलो विवाह १६ वर्षको उमेरमा भएको थियो। दोस्रो २० वर्षको उमेरमा सम्पन्न भयो र तेस्रो गत वर्ष अर्थात् २१ वर्षको उमेरमा भयो।
अदनानका पत्नीहरूको नाम शुम्भल, शुबाना र शाहिदा हो अब तीनै जना पत्नीहरू चौथो श्रीमती जौको खोजीमा छन्, उनको नाम पनि एस अक्षरबाट नै सुरु हुनुपर्छ। तिनीहरू घरमा खुसी साथ बसिरहेका छन् र दुई पत्नीबाट त सन्तानहरू समेत छन्।
अदनानको पहिलो श्रीमती शुम्भलका तीन छोरा र दोस्रो शुबानाका दुई छोरा छन् भने तेस्री पत्नी शाहिदाले शुबानाको एउटा बच्चा अपनाएकी छिन्।
सङ्घीय प्रणाली समाप्त पार्न खोज्नेविरूद्ध एकजुट बनौं : अध्यक्ष यादव
बढ्दै डिभोर्सका घटना : ७२ वर्षको उमेरमा पनि सम्बन्ध विच्छेद
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ६६ प्रतिशत काम सम्पन्न